Maninona i Bahamas no mila fiantràna ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Torolàlana azo ampiharina momba ireo fomba maro fanolorana fanampiana
Voadika ny 16 Oktobra 2019 6:28 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, Italiano, Español, Français, English
Miezaka mafy i Bahamas mba hiarina taorian'ny fandalovan'ny tafiodrivotra Dorian [teny frantsay], rivodoza voalohany anatin'ny sokajy faha-5 ho an'ny vanim-potoanan'ireo rivodoza ao amin'ny faritra Atlantika ny taona 2019 [teny frantsay].
Tonga masiaka tao Bahamas ny rivodoza mahafaty Dorian teo anelanelan'ny 1 sy ny 3 septambra 2019, namela faharavàna tsy hita noanoa tamin'nizay nolalovany, anisan'izany ny isan'ireo traboina tsy nitsahatra nitombo, ireo tondradrano goavana, ireo faharavàna tsy hay nohadihadiana ary, somary nisoko mangina, ireo trangana rarin-tsaina mamela fery toarian'ny dona nitranga..
Tsy azo lavina, miaina ao anatina fotoana iray maha-valaketraka isika: ny fihafanàn'ny planetantsika dia mamokatra rivodoza miha matanjaka ary ireo Firenena Nosy kely andalam-pivoarana, hatreto, no tena voa mafy indrindra sady tsy dia manana ny enti-manana hiatrehana izany. Ankoatr'izay, nandeha tsy niolankolaka ny gazetiboky Le New Yorker ary nanome lohateny ity loza ity ho toy ny “tsy rariny ara-toetrandro”.
Na dia marobe aza ireo Bahameàna tany amin'ireo faritra tena faran'izay niharan-doza no mampalahelo momba izay heverin'izy ireo ho valinteny tsy mendrika avy amin'ny governemantany, ny tranonkala ofisialy an'ny firenena fara faharatsiny no hita ho milamina tsara, miaraka amina pejy manokana misy pejy miresaka fanampiana vonjy taitra ho an'ireo tra-boina. Misy ireo vaovao mifandraika tsara amin'ireo asa fanavotana ao amin'ilay tranonkala, ao anatin'izany ny mikasika ny fomba samihafa hanaovana fanampiana ara-bola, na fanomezana sakafo (hita any amin'ny faran'ilay pejy ny lisitra iray misy an'ireo vokatra tena be mpangataka).
Raha ny marina, vao haingana no nisy taratasy iray tao amin'ny Facebook nataon'ilay vehivavy trinidadiàna, poeta Shivanee Ramlochan, miaraka amina fahaizana mandaha-teny, nanolo-kevitra hoe ny iray tamin'ireo fomba tena mahomby indrindra mba handresena ny tebiteby dia ny fanomezan-tanana sy ny manome:
Nandefa miaramila ireo firenena Karaibeana sasantsasany mba hitondra fanampiana eny an-kianja. Tamin'ny alalan'ny lakana, namatsy rano fisotro sy fanadiovana rano maimaim-poana tao amin'ireo faritra misy ny tangoronosy i Saint-Vincent-et-Grenadines. Nikarakara ireo fonosana misy an'ireo zavatra tena ilaina maika Ireo sekoly sy ireo fiangonana. Nampanantena ny fanohanany ireo olona ambony. Ary nanao fiaraha-miasa tamina tarika iray misy an'ireo mpitsabo sy ireo psikôlôgy ny “Gallerie d'art nationale” mba hanaraka akaiky ireo sisampaty eny andalam-pamerenana ny fahasalamany ara-tsaina.
Fanombohana tsara ny tranonkala Charity Navigator, satria voaraikiny an-tsoratra ireo fikambanana mandray andraikitra izay manolotra fanampiana ho an'ireo ao Bahamas. Mbola tsara kokoa, voasokajy arakaraka ny toerana izy ireo, mba hahafahan'ny tsirairay mifantina hanomezana an'ireo fikambanana mpiahy misy ao Bahamas mba hanampiana haingana araka izay tratra an'ireo izay tena voadona mafy.
Ny Ivon-toerana ho an'ny fitiavana ny mpiara-belona miatrika ny loza voajanahary miorina ao Etazonia ihany koa dia fitaovana iray ilaina “mba hitazonana antsika hahara-baovao momba ireo fanampiana natokana ho an'ireo loza voajanahary”. Mba hisorohana an'ireo voka-dratsy mety ho entin'ireo rivodoza toa an'i Dorian ao Karaiba sy ireo ampahany hafa ao Amerika amin'ity taona ity, dia noforonina ny Tahirimbola Fandraisana anjara Atlantika ho an'ny vanim-potoanan'ny rivodoza 2019, tahirmbola izay hifantoka amin'ireo ezaka fanarenana fohy ezaka sy lavitra ezaka. Novinavinain'ny sampandraharaha amerikàna misahana ny raharaha momba ny ranomasimbe sy ny any an'habakabaka (NOAA) ho hatramin'ny 45% henjana kokoa noho izay noheverina ny loza mety hitranga amin'ny vanim-potoanan'ny rivodoza ny taona 2019. Afaka mifidy ny faritra izay hotolorany fanampiana ihany koa ireo mpanome fanampiana.
Misy koa ireo asa famonjena nikendry tanjona manokana, toy ny tanjon‘ny fondation HeadKnowles izay mitondra an'ireo vokatra mahavelona mankany amin'ireo faritra tena voakasika indrindra ao amin'ireo Nosy Abacos sy ny Grand Bahama, manomboka hatramin'ireo entana goavana indrindra, toy ireo mpiteraka angovo, ka hatramin'ireo filàna kely indrindra toy ireo fitaovana fiadiana amin'ny moka. Tamin'ny fotoana namoahana ny lahatsoratra, tsy lavitry ny 1,5 tapitrisa dolara (manodidina ny 1,37 tapitrisa eoroa) no voaangon'ity fandraisana andraikitra ity.
Hery manosika ny Alliance des Bahamas ho an'ny zon'ireo biby sy ny fangorahana (BAARK) ny mba hamindràna ireo biby rehetra ao amin'ireo Nosy Abacos sy ny Grand Bahama any anatin'ireo trano fandraisana mba ho any amin'ireo toerana mety kokoa handraisana an-tanana azy ireo.
Mitantana tambajotra midadasika sy mahomby eny an-kianja, manerana an'izao tontolo izao, ireo fikambanana miorina tsara sy matotra toy ny Armée du salut, ny Croix-Rouge ary ny Rotary Club.
Marobe ireo fomba azo anampiana, ary araka ny voalazan'i Shivanee Ramlochan, ahafahana miady amin'ireo ahiahy sy afaka hifantohana tsara amin'izay azo atao ireo fanampiana rehetra ireo: